Mayelana NATHI - AnHui Gaoge Intelligent Equipment Co., Ltd.
Imibono yethu iba yiqiniso lakho
I-GAOGE ithuthukisa, idizayine, ikhiqize futhi ifake izitshalo eziphelele zokukala, ukupakisha, ukugoqa, ukugoqa, ukugoqa nokudlulisa izikhwama nama-pallet.
Olayini abazenzakalelayo abagqama ngezinga labo eliphakeme lokuthembeka, ikhwalithi, nobuchwepheshe obusha.
I-GAOGE ithakaselwa iklayenti elikhulu, kuzwelonke nakwamanye amazwe, ngokusungula kwayo, ukuthembeka kanye nezinga eliphakeme lezixazululo zayo zobuchwepheshe.
Amakhono kanye nesipiliyoni somnyango wethu wezobuchwepheshe kuqinisekisa izixazululo ezenziwe zaba ngezakho, ezithile, ukufeza izidingo zanoma yiliphi iklayenti.
Kuze kube manje izinkampani eziningi eChina nasemhlabeni wonke zikhethe ukuthembela kithi ngezixazululo zethu, ezigqama ngenxa yekhwalithi yazo ephezulu, ukuthembeka nokusebenza kahle.
Isitshalo esibalulekile sokukhiqiza
Indawo yokukhiqiza i-GAOGE, etholakala eGangji Town, eHefei, e-Anhui, eChina, ihlanganisa indawo engaphezulu engaphezulu kwe-3000 m².
Ukunaka imishini emaphaketheni, kusukela ngo-2010 inkampani ifakwe i-CNC lathes, i-CNC i-punch press, i-bending machine, i-laser cutting machine, i-grinder njll.
Ngosayizi waso omangalisayo nokuhlukahluka kwemishini, isitshalo seGaoge singenza izinhlelo zokupakisha eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Ihambisana nefilosofi yayo yokukhiqiza, i-GAOGE ikhiqiza zonke izingxenye ezidingeka kakhulu emishinini yayo esitshalweni sayo.
Yonke imikhiqizo ye-GAOGE yenzelwe futhi yenziwa ngaphakathi kwenkampani. Ukufeza lokhu, i-GAOGE ingathembela eqenjini labaklami nabachwepheshe abakhethekile, abakwazi ukukhiqiza noma yiluphi uhlobo lomshini kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ukusetshenziswa kwezikhungo zomsebenzi ngokuya ngamathuluzi omshini wokulawula izinombolo, imishini yokusika i-laser, ama-press-benders kanye nezinhlobonhlobo zemishini emisha ivumela i-GAOGE ukuthi ikhiqize izingxenye eziningi zemishini yemishini yayo.
Le filosofi yokukhiqiza ihumushela ochungechungeni lwezinzuzo zekhasimende, elingathembela ekulawulweni ngokuphelele kwekhwalithi kuzinto nasekuguqukeni kwazo okugcwele, ngenkathi kuqinisekiswa isivinini esiphezulu sokwenza imishini emisha kanye nezingxenye ezingasebenzi.
Izixazululo zazo zonke izidingo
I-GAOGE inikeza okungaphezu nje kwemishini eyodwa yokupakisha. Ingakhiqiza amasistimu aphelele, kusuka kusitoreji sezinto ezingavuthiwe kuya ocwaningweni nasekufakweni komjikelezo wonke wokukhiqiza, kuphetha ngokufaka.
Elinye lamanani wenkampani yethu angeziwe yikhono lokunikela ngezingcezu zemishini ngokwezifiso ngokuya ngezicelo zekhasimende. Ukuqala ngezinga lokwakhiwa elihlolwe kahle, i-GAOGE inganikeza ngochungechunge lwezixazululo ezenziwe ukuphendula ngokuphelele izidingo zangempela zamakhasimende, okuhlanganisa ukuthembeka, ubumnene bokufakwa nokuguquguquka kokusetshenziswa.
Siyazi ngendima yethu ebalulekile ekukhuleni kwebhizinisi lobuchwepheshe kwamakhasimende ethu. Umsebenzi wethu uhilela okungaphezu kokunikeza imishini nempahla yokusebenza: lokho esikunikezayo yizinsizakalo ezigcwele zokubonisana.
Isevisi elandela amakhasimende ethu kusuka ekuhleleni isitshalo kuye ekwakhiweni nasekusebenzeni kwaso, kusuka ekuqeqeshweni kwabasebenzi kuya ekusebenziseni imishini. Ubudlelwano obuseduze namakhasimende ethu, obuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi sibonga insizakalo yethu yamakhasimende, inhlangano ephelele futhi echazwe kahle ngemuva kokuthengisa, ephethe ukunakekela amakhasimende ethu.
Inhloso yale nhlangano ingafingqwa ngezenzo ezintathu eziyinhloko:
1.ukulawulwa kwezicelo nezimo eziphuthumayo
Ukuphathwa kwezingxenye zokungcebeleka
Ukushesha kokungenelela nokuhleleka, okwazi ukuqinisekisa ukulethwa kumakhasimende, noma kuphi futhi kungakapheli amahora angama-48, kwenza elinye lamaphuzu aqinile we-GAOGE.
Ukulwela njalo ubuholi
Yonke imikhiqizo yethu ifundwa, yakhelwe futhi yenziwa ngaphakathi kwenkampani. Le filosofi yokukhiqiza ihumushela ochungechungeni lwezinzuzo zekhasimende:
Ukulawulwa kwekhwalithi eyi-1
Isivinini sokubulawa okukhulu
Isevisi ye-4.acurate kuyo yomibili imishini nezingxenye ezisele
Ukufuna okuqhubekayo kwekhwalithi
Ekuphokopheleni inhloso yokuqhubeka sithuthukisa ikhwalithi yemishini yethu kanye nensizakalo yethu "yamakhasimende", sihlome ngohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yezinqubo zethu zokukhiqiza, ngokuhambisana nemodeli eqinisekisiwe neyaziwa umhlaba wonke, i-ISO 9001-2015, esekwe lapho isitifiketi sethu sanikezwa khona eminyakeni eminingana edlule. Futhi sinesitifiketi se-CE semishini yethu.